Dayuuradaha Israel oo dhaafi la’ gantaalo casri ah oo la siiyey Ciidanka Suuriya (Markii 3-aad oo gantaalo laga qabtay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dayuuradaha Israel oo dhaafi la’ gantaalo casri ah oo la siiyey Ciidanka...
Dayuuradaha Israel oo dhaafi la’ gantaalo casri ah oo la siiyey Ciidanka Suuriya (Markii 3-aad oo gantaalo laga qabtay)
(Dimishq) 26 Luulyo 2021 – Ciidamada Daafaca Cirka Suuriya ayaa markale soo ridey 2 gantaal oo kuwa la hago ah oo ay dayuuradaha Israel ku ganeen afaafka magaalada Dimishq ee Set Zaynab.
Waxay taasi ka dhigan tahay in ay markii 3-aad la xaaleen gantaalaha daandaansiga ah ee Israel, iyadoo kuwan ugu dambeeyey lasoo ganay shalay casar liiqii abbaarigii 5:40am aminta maxalliga ah, iyagoo weliba adeegsanaya hawada Lubnaan oo ay iyadana ku xadgudbayaan.
Waxaa gantaalaha soo ganay 2 dayuuradood oo F-16 iyagoo bartilmaameedsanayey meel gaar ah oo ku taalla Set (Sayyidah) Zaynab oo 10km koonfurta kaga beegan caasimadda Dimishq.
Ciidamada Suuriya ee daafaca cirka ayaa haatan ku qalabaysan gantaalaha Ruush-sameega ah ee Buk-M2E kuwaaso ah kuwa lagu qabtay gantaalaha la hago ee ay Yuhuuddu soo riddey, sida uu sheegay Rear Admiral Vadim Kulit, oo saxaafadda war siiyey.
Previous articleSawirka qeexan iyo garaafiigga casriga ah ee lagu baahiyo Horyaalka Somalia oo la amaanay (Dood ka socota Aljeeriya)
Next articleDood qosol badan oo ka taagan sawirka MW Farmaajo ee lagu arko shaashadda Istaadiyo Muqdisho